HomeAfaan OromooHaleellaa Mooyyaleetti Kaleessa Galgala Raawwateen namni 13 Ajeefame, 100 Ol Madaaye
NAAYROOBII, Muddee 13, 2018 (VOA Afaan Oromoo) — Haleellaa hidhattoonni naannoo shanii kaleessa Mooyyalee keessatti dhaqqabsiisaniin namni 13 lubbuun isaanii darbe. Mootummaan Naannoo Oromiyaa harra ibsa baaseeni haleellaa Kanaan namni 100 madaawuullee beeksiseera. Jiraattonni magaalattii garuu hidhattoota naannoo shaniittis dabalata humni raayya ittisa biyyaa Mooyyaleen qubatee jiru ajjeechaa kana keessatti hirmaachuu dubbatanii jiru.
Obbo fuuggicha Dheengee Kantiibaan Magaalaa Mooyyalees Raayyaan Ittisaa ajjeechaa kana keessatti qooda fudhachuu mirkaneessanii jiruu, Galmoo Daawit dabalata qaba.
Rakkoo Nageenyaa Mooyyalee: Namoonni 13 yoo ajjeefaman, 100 ol madaa’an
(BBC Afaan Oromoo) — Rakkoo nageenyaa magaala Mooyyalee keessatti uumameen namoonni 13 yoo ajjeefaman 100 ol madaa’aniiru jedha Biiroon Komunikeeshinii Oromiyaa.
Ka’umsi rakkoo nageenyaa kanaa wal waraansa hidhattoota naannoo Somaalee fi Oromiyaa jidduutti adeemaa jirudha.
Aanga’oonni aanaa Mooyyalee hidhattoota naannoo Somaalee meeshaa gurguddaa hidhatantu daangaa Oromiyaatti cehee uummata haleelaa jedhu.
Aanga’oonni naannoo Somaalees akkuma kana hidhattoota naannoo Oromiyaatti quba qabu.
”Sodaan nutti baay’ate yeroo mara nutti deebite jennaan baqanne”
Rakkoon magaalaa Mooyyalee waggoota dheeraa kan lakkoofsisedha kan jedhan hogganaan waajjira ODP aanaa Mooyyalee Obbo Alii Xachee, Sadaasa bara 2011 A.L.I irraa eegale bifa addaatiin waraanni qindaa’aan adeemaa jira jedhu.
“Humna leenjii waraanaa addaa qabu, kan garee Al-shabaab, garee raayyaa ittisa biyyaafi pooliisii addaa naannoo Somaalee irraa foxxoqeen ijaarametu meeshaa waraanaa gurguddaa hidhate Mooyyalee akka Moqadiishuu godhe” jedhu.
Rakkoo kana mootummaa Federaalaafis ta’e Mootummaa Naannoo Oromiyaaf himnus xiyyeeffannaa itti hin kennine jedhu qondaalli kun.
“Ega kaleessaati [Roobii] manneen hedduu barbadaa’anii jiru, buufata boba’aafi baankota irratti aggaammii addaatu jira.”
“Waajjiraaleen aanaa Mooyyalee hedduun haleellaa kanaan dura raawwatameen barbadaa’anii jiru, amma ammoo waajjira poolisii aanaa Mooyyaleefi waajjira bulchiinsa aanaa qabachuuf adeemaa jiru” jedhu.
Hospitaala Mooyyalee irratti meeshalee gurguddaan haleellaan raawwatame, ogeeyyiin waan gadi dhiisanii baqataniif hospitaalichi gutummaan guutuutti hojii dhaabuu isaas Obbo Aliin BBC’tti himaniiru.
“Meshaan isaan ittiin nu lolan, meeshaalee gurguddaa uummanni keenya gurraanu dhagahee hin beekne waan ta’eef uummanni ofirraa qolachuu hin dandeenye” jedhu.
Raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Mooyyalee kessa jiraatullee rakkoo kana furuu hin dandeenye jedhu Obbo Aliin.
‘Eenyummaa keenya dhabne’
Miira abdii murannaa guddaan BBC’tti kan dubbatan qondaalli kun mootummaan Federaalaafi kan Naannoo Oromiyaa uummata Booranaaf dantaa waan qabu natti hin fakkaatu jedhu.
“Mooyyalee keessaa ummanni ganda afurii buqqa’eera”
“Ani mataan kiyya itti gaafatamaa waajjira ODP aanaa Mooyyaleeti. Gara gahee mootummaatiin ana caalaa kan gahee qabu as keessa jira jedhee hin yaadu, garuu qaama himuu qabnu maratti himnee jijjiirama dhabne” jedhu.
Uummati Booranaa qe’ee isaa qofa osoo hin taane eenyummaa isaa dhabee jira jedhu.
“Sirna Gadaan wal qabatee ardaaleen jilaa sirni aadaa itti gaggeeffamu saamamee jira” jedhu.
“Lammiin Oromoo iddoo jiruu, yoo lammiif kan quuqamu taate uummata Boranaaf akka birmatun kadhadha” jedhu.
Abbaan Gadaa Booranaa maal jedhu?
”Lafa keenya kan Booranaa mootummaadhumatu gurgurate. Kanaaf dhimmi dhimma mootummaan nama walitti naqe waan ta’eef mootummaatu hiikuu qaba” jedhu Abbaan Gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo.
“Hanga Mooyyalee keessa alaabaan lama dhaabatee jirutti nagaan dhufuu hin danda’u, Alaabaan lafa Oromoorraa ka’uu qabas” jedhan.
Sochiin gama somaaleetiin godina Daawwaa jedhamu ijaaruufi magaala guddoo isaa Mooyyalee godhachuuf gaggeefamaa jirus dhaabbachuu qaba Abbaa Gadaa Kuraan.
Mootummaan seenaa ilaalee murteessuu qaba kan jedhan Abbaan Gadaa, riifarandamiin bara 1997’s fudhatama hin qabu jedhu.
”Riifarandamiin bara 1997’tuu mala saamicha lafa Oromooti. Lafa abbaa qabdurratti mana namni keessa taa’erratti quba baasuuni aad-malee” jedhan.
Ardaaleen jilaa amma bulchiinsa naannoo Somaalee keessa galan jiraachuu kan eeran Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo, ”Seenaa dhaloota lafa kanaa ilaalee mootummaan murtee haa kennuu” jechuun gaafataniiru.
”Mooyyalee akka Dubaay gochuun fedhii biyyoota lamaaniiti”
Haleella bara kana qofa gandoota aanaa Mooyyalee 17 irratti raawwatameen namootni 130,000 qe’ee irraa buqqa’anii gargaarsa malee gariin Keeniyaatti, gariin aanaalee ollaatti kaan ammoo bosonatti baqatee jira jedhan Obbo Alii Xachee.
Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu ibsa har’a baaseen rakkoon kun qaamolee naannicha tasgabbii dhowwuu barbaadaniin kan raawwatamu waan ta’eef mootummaan hundeerraa furuuf kutannoon hojjechaa jira jedheera.
Namaoota miidhamaniif deeggarsi barbaachisu daandiirra bu’eeras jedha ibsichi.
Gama Mootummaa Naannoo Somaaleen deebii argachuuf yaalii goonee nuuf hin milkoofne.